Amanqanaba okukhula kweekati, zikhula zide kangakanani? | Amakati eNoti
Amakati amancinci amancinci ziyakhula ngokukhawuleza okukhulu. Kunyaka nje omnye baba nobunzima obujikeleze iigram ezili-100 xa bezalwa bayi-2 okanye 3kg kwiinyanga ezilishumi kamva. Kodwa ukongeza, zithathwa njengabantu abadala ukusuka kwiinyanga ezi-6 okanye ezi-7, kuba ngelo xesha ubudala baqala ukuba nobushushu kwaye, ke, ukuba kwenzeka ukutshata, ikati iya kuzala eyayo inzala. Ngeenyanga ezintandathu kuphela, ewe.
Kodwa ukukhula kweekati akupheli kunyaka wokuqala, kodwa kunyaka wesibini nowesithathu umzimba wabo uya kwanda kancinci, kwaye baya kutyeba njengoko ukukhula kwabo kusondela esiphelweni. Yazi inqanaba ngalinye umhlobo wakho aya kudlula kulo kwaye uyonwabele nganye nganye inekhamera ngesandla njengoko ixesha lihamba ngokukhawuleza okukhulu, kwaye kwangoko uyakubona ukuba ibhola yakho yeenwele iye yaba nguMnu Cat.
1 Amanqanaba obomi bekati
1.1 Inyanga yokuqala
1.2 Inyanga yesibini
1.3 Phakathi kwenyanga yesithathu neyesithandathu
1.4 Ukususela kwinyanga yesithandathu kuye kunyaka
1.5 Ukusuka kunyaka wokuqala ukuya kwemithathu
1.6 Ukususela kwiminyaka emithathu ukuya kwesixhenxe
1.7 Ukususela kwiminyaka esixhenxe ukuya kwelishumi elinambini
1.8 Ukusukela kwiminyaka elishumi elinambini
2 Zingakanani iikati ezikhulayo?
3 Uqala nini ukubona nokuva ikati?
4 Buyintoni ubunzima bekati?
Amanqanaba obomi bekati
Apha ngezantsi sichaza amanqanaba ahlukeneyo okukhula kwekati yakho ebomini bayo bonke. Kwinto nganye siza kuchaza utshintsho olwenzekayo emzimbeni nakwindlela abaziphatha ngayo ukuze wazi ngalo lonke ixesha ukuba ikhula njani ikati.
Amantshontsho ekati azalwa iimfama nezithulu. Baxhomekeke kunina ukugcina iqondo lobushushu lomzimba wabo, ukondla kunye nokuhlala becocekile, njengoko ebanceda ukuba bazikhulule. Kweli nqanaba lobudala sele belazi ivumba lamathe abo kanina kwaye bakhokelwa livumba lokumlandela, nangona kungayi kuba kwiveki yesithathu yobudala ukuba le mvakalelo iya kuphuhliswa ngokupheleleyo.
Malunga emva kweeveki ezimbini baya kuvula amehlo abo, kwaye baya kuqala ukuphonononga imeko-bume yabo, kodwa bayothusa, kwaye kude kube ziintsuku ezili-17 abayi kuba nakho ukuhamba kakuhle. Okwangoku, bahlala kufutshane nomama ongazukuthandabuza ukubakhusela kuye nakubani na ofunekayo. Yiyo loo nto kweli nqanaba kungcono ukuba, ukuba sihlala nezinja, singaze sizishiye zodwa neekati.
Kwiiveki ezintathu Ukuncancisa kungaqala, ukubanika ukutya okusemathinini (ngcono ukuba kuyindalo). Kwakhona Lixesha elihle kubo ukuba bafunde ukuzikhulula kwitreyi, njengoko benokuzikhulula. Ungabafundisa ngokuzibeka ngobunono kwibhokisi yenkunkuma emva kwesidlo ngasinye; Ngale ndlela uyakubona ukuba kungekudala uza kuqonda njani ukuba kulapho kufuneka aye khona ngalo lonke ixesha eyifuna.
Kunye neeveki ezine baqala ukudlala omnye komnye, begxuma ngaphezulu kunina kwaye balumana. Kweli nqanaba bafunda ukuba kufuneka lawula ukomelela kwamazinyo akhonjengoko banokuba buhlungu ngamanye amaxesha.
Ngamehlo asebenzayo kunye neendlebe, ukukwazi ukugcina ubushushu bomzimba, kunye nomnqweno omkhulu wokuphonononga yonke into, inqanaba elibaluleke kakhulu liqala: intlalontle. Kancinci kancinci umama wabo uza kuyeka ukuncancisa, ke ngoko amantshontsho kuya kufuneka afunde ukuzimela kancinci. Ke kule minyaka Liya kufika ixesha lokuba isilwanyana sidibane nabantu. Kuya kufuneka sibathathe ngobunono, sibanike i-caresses kunye ne-pampering ukuze basidibanise nento entle (darling), kuba kuyathenjwa ukuba ezi kati azoyikiswa ngabantu, kodwa ngokuchaseneyo.
Kwiiveki ezisibhozo, banokwamkelwa. Kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba bayasebenza kwaye badlala kakhulu, into ifanitshala yakho engayithandi kakhulu. Nangona unesikrweqe onokufikelela kuso, akukho mfuneko yokuba kubekho ngxaki.
Phakathi kwenyanga yesithathu neyesithandathu
Kule minyaka ikati "sele iyi" ikati. Sele unayo yonke into oyifunayo ukulungiselela ukuba mdala. Ayidingi mama ukuba aphile, kwaye kunokwenzeka ukuba uqale ukufuna ukuya phesheya, into esiya kukuvumela yona ukuba siqinisekile ngokupheleleyo ukuba awuyi kuba sengozini.
Abafazi baya kubushushu malunga neenyanga ezi-6. Ukuba ufuna umhlobo kuphela, isilwanyana sasekhaya, siya kuba ngaphezulu kokucetyiswayo Spay okanye ubasondeze (abesilisa nabasetyhini) kule minyaka. Nangona inokwenziwa phakathi kweenyanga ezi-4 ukuya kwezi-6, kungcono ukulinda de ibe li-6, ukunqanda iingxaki zophuhliso (ngakumbi kwimeko yamadoda). Ukongeza, ukuba uyamnika imvume yokuhambahamba, oku kuya kuthintela ikati yakho ukuba ingabuyi ekhaya inokwenzakala okanye, ukuba ibhinqa, ngokumangala (ukukhulelwa).
Ukususela kwinyanga yesithandathu kuye kunyaka
Ngoku ewe, sele unayo ikati yabantu abadala. Banokubonakala ngathi balale kakhulu, kodwa kuya kufuneka wazi ukuba bayathanda ukudlala, ngakumbi ebusuku. Ewe zizilwanyana zasebusuku, ke ukuba ufuna ukulala ebusuku kuya kufuneka lisebenzise ixesha ovuke ngalo emini uzodlala naye kwaye "umtyhafise." Kwimarike uza kufumana ezininzi iintlobo zeethoyi, Njengeentambo, izikhombisi zelaser, izilwanyana ezixhonyiweyo ... Khetha ezo ucinga ukuba ziya kuzithanda kakhulu, kwaye wonwabe nomhlobo wakho onoboya.
Ukusuka kunyaka wokuqala ukuya kwemithathu
Ngeli nqanaba ikati iya kugqiba ukukhula kwaye iya kuqala ukubonisa isimilo sokufikisa. Kuqhelekile ukuba kule minyaka Yenza lento oyifunayo, engathobeli nemiyalelo esiyinika yena. Ngaphandle kobungakanani bazo, iseyizinjana ezithandayo ukudlala kunye nokutsala umdla, into abahlala beyiphumeza, akunjalo?
Ukususela kwiminyaka emithathu ukuya kwesixhenxe
Kancinci kancinci siya kuqaphela ukuba ikati yethu ayifuni ukudlala kakhulu njengangaphambili. Uchitha ixesha elininzi elele (malunga ne-14: XNUMX pm ngosuku), kunye nokuziphatha kwakhe iba yindawo engaphezulu ukuba iyangena. Ngapha koko, ukusukela kule minyaka kunzima (kodwa akunakwenzeka) ukuba amkele ikati entsha kwindawo yakhe, ethi, ngendlela, likhaya lakho.
Ukususela kwiminyaka esixhenxe ukuya kwelishumi elinambini
Ukusukela kwiminyaka esixhenxe ikati iqala ukuguga. Baye bahlala ngakumbi, bazole. Umhlobo wakho uya kuchitha ixesha elininzi ephumla, kwaye engadlali kangako. Ewe iya kuhlala isenza ngamanye amaxesha, kodwa njengoko usondela kwiminyaka yobudala awuyi kuba nomnqweno ongaka ekuleqeni iithoyi.
Ukusukela kwiminyaka elishumi elinambini
Ikati yakho indala. Uya kuqaphela indlela ancipha ngayo umnqweno wokutya, kwaye noluvo lwakhe luyehla. Ingaveliswa utshintsho dermatological, phuhlisa i-hyperthyroidism y iinzipho zazo zingakhula kakhulu ngenxa yokusetyenziswa kancinci. Bachitha ixesha elincinci lokuzilungisa, into engazukuthatha thuba lide ukuyibona kwidyasi yabo, eya kuthi ilahle ukukhanya kwayo.
Ixesha lokuphila kwekati limalunga neminyaka engama-25. Kodwa nokuba iya kude kangakanani, ukuba uyayinyamekela, uyithathele ingqalelo kwaye ngaphezu kwako konke uthando oluninzi, uya kuba ngumhlobo wakho osenyongweni.
Uyikhathalela njani ikati endala
Zingakanani iikati ezikhulayo?
Iikati zikhula ixesha elingakanani? Njengoko sele sibonile, ikati yifeline inokukhula ngokukhawuleza okukhulu. Kunyaka nje omnye, amathambo kunye nezihlunu zakho ziya kufikelela ebudaleni. Oku kuthetha ukuba ngokuqinisekileyo uya kuba ukulungele 'ukubona umhlaba' okanye, kwimeko apho ungaphumiyo, ube yiNkosi yeKat.
Ukuziphatha kwakhe siya kuqaphela ukuba kuya kutshintsha, kancinci kancinci. Umnqweno wokudlala uya kuqhubeka uphezulu, kodwa njengoko ixesha lihamba, uya kukhetha iseshoni yokubamba kwaye ungonwabisi kangako. Kodwa lumka, oku akuthethi ukuba akufuneki sidlale naye, kodwa nje asizukumbona ebaleka ngamandla amakhulu njengaxa wayeyinjana.
Kodwa, ngaphandle kwenyani yokuba kucetyiswa ukubanika ukutya (iicokethi) zeekati zabantu abadala ukusuka kunyaka wobomi, uphuhliso lwayo aluzukugqitywa okwangoku. Ukuba ngeenyanga zokuqala amathambo ayo ayakhula, ukusukela kunyaka wesibini ukuya phambili siyakubona ukuba 'ithatha umzimba', iyanda. Kuxa ubunzima bemisipha buqukumbela ukukhula. Olu phuhliso lungahlala ngaphezulu okanye ngaphantsi, kuxhomekeke kubungakanani bokugqibela besilwanyana kunye nokuzala, kodwa ihlala iphela ngeminyaka emithathu.
Ukusukela ngoko ukuya phambili, kwaye ngokokubona kwam, siya kuba nekati yabantu abadala ngokwenene, ngandlela zonke.
Uqala nini ukubona nokuva ikati?
Ngokubanzi, thatha phakathi kweentsuku ezili-9 ukuya kwezili-16. Ukukwazi ukuqala ukuva nokubona kuvela phantse ngaxeshanye. Ukuba sigxila emehlweni, ekuqaleni ziya kuba luhlaza okwesibhakabhaka, kodwa njengoko iintsuku zihamba, umbala wazo wokugqibela uyakuchazwa, onokuba luhlaza oluhlaza, obumdaka okanye umbala omthubi ngakumbi kuxhomekeke kwimfuza yawo.
Iindlebe zakhe, ezazincanyathiselwe ekuzalweni, ngoku zivulekile kwaye ziqala ukuba luncedo kwikatana. Enkosi kubo, kancinci kancinci imeko yokulinganisela iya kulawula, njengoko ikwindlebe ephakathi kwindlebe nganye.
Buyintoni ubunzima bekati?
Ubunzima bekati buya kwanda njengoko ikhula. Ke ngoko, ngezantsi siza kukuxelela ukuba ubunzima obuphakathi buthini:
Usana olusandul 'ukuzalwa: Iigram ezili-100
Iveki yokuqala: I-115-170 iigrem
Iiveki ezi-2-3: I-170-225 iigrem
Iiveki ezi-4-5: I-225-450 iigrem
Iinyanga ze2: I-680-900 iigrem
Iinyanga ze3I-1,4 kilos
Iinyanga ze4I-1,8 kilos
Iinyanga ze6I-3 kilos
Ukusuka kwisiqingatha sonyaka wobomi ade ayokufikelela kwiinyanga ezilishumi elinambini ubudala, phakathi kwe-100 kunye ne-150 yeegramu zongezwa malunga nenyanga nganye. Kodwa zininzi iikati ezingazukugqibezela ukukhula kwazo kude kube semva kweminyaka emibini, eya kuthi xa ifikelele kubunzima bayo obukhulu obumalunga neekilo ezi-4 ngokomndilili.
Ukwazi amanqanaba ahlukeneyo okukhula kwekatana kunokukunceda kakhulu ukuba uqonde ukukhula kwawo. Ndiyathemba ukuba eli nqaku liluncedo kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Curiosities » Ukukhula kweekati
UMatías Amaru Valdivia Silva sitsho
Ulwazi oluhle kakhulu, ngokoqobo yonke into ebendiyifuna, ndithathe nje iikati ezi-3 kwaye sele ndinayo enkulu, phantse uneminyaka emi-3 kwaye akonwabanga ngekati ezingaphantsi kweenyanga ezi-6 ubudala.
Phendula kuMatías Amaru Valdivia Silva
Ndonwabile ukuba iluncedo kuwe, Matías 🙂.
Ndamangaliswa ngumxholo wokuba bagqiba ukukhula phakathi kweminyaka emi-2 ukuya kwe-3 yobomi. Iminyaka emi-3 eyadlulayo ndamkela ikati elalisele lineenyanga ezintlanu ubudala. Yayiziinwele ezimfutshane de kwaba ngunyaka onesiqingatha apho yaqala ukukhulisa uboya obuninzi kunye nomkhono onjengengonyama onentamo yayo. Ndihlala kwindawo efudumeleyo yemozulu. I-5 ukuya kwi-28 C yiyo loo nto engazange andichazele ukukhula koboya bakhe.
Ndinekati eneenyanga ezintlanu ubudala ebusuku ndamlalisa kwistransport evaliweyo kwaye ngosuku olulandelayo ndiyamkhupha ndimgijimise edlala kwigumbi lokuhlala. Ndachitha inyanga kunye naye ekhaya, kodwa Ngenye imini ndandindwendwelwe ngabahlobo bam nasebusuku Njengamaxesha onke ukwanga kwesiqingatha ngaphambi kokuba ndilale kodwa ukusukela ebusuku xa ndimkhulula wayenjalo. Ndiyoyika kakhulu kwaye ndondile kwaye wandiphuza kabuhlungu, waphuza wamanga kwaye wahlunguzela intloko kwaye wenza izinto ezingaqhelekanga ngomlomo wakhe, ngokutsho komhlobo wam, wongeze ukuba inkuku encinci inokungena endlebeni yakhe kodwa andikaboni Akukho namnye kubo ondixelele ukuba ukusweleka kwekatana, kuba bazalela amaqanda, andinamali kude kuphele inyanga kwaye ndikhathazekile kakhulu.ecala lam kunye nokutya kutya kakuhle kwaye kuyadlala kodwa andazi kwenzeke ntoni ukusukela ngala mhla sasindwendwelwe ngabamelwane, okanye wenza ntoni intombi yomnye waba bamelwane kuba ukusukela ngoko ndiyifumana ikude, ndicela undiphendule ngokukhawuleza okukhulu, ndiyabulela ngokuzimasa
Okokuqala, akukho mntu, nokuba ngumntu okanye ikati, onokufa ngenxa yesinambuzane ngaphakathi kwindlebe 🙂 Kule nxalenye, ungakhathazeki.
Ewe ewe, inokucaphukisa. Nokuba awuyiboni, ukuba unayo, iya kuba ifihliwe kwindlebe yakho yangaphakathi.
Iindaba ezimnandi zezokuba, ngokubala kwakho, kubonakala ngathi kancinci kancinci uphila ubomi obuqhelekileyo. Kodwa ukuba indlela oziphethe ngayo itshintshile ukusukela ngala mhla, amathuba okuba umntu okanye into ikubangele iingxaki.
Ndikucebisa ukuba uthethe nabahlobo bakho, nabo bonke abo babesendlwini yakho, ukuze ufumanise ukuba kwenzeka ntoni kuye. Akuqhelekanga ukuba ikati iguqule indlela yayo yokuziphatha ukusuka kolunye usuku ukuya kolandelayo. Into embi kuye kumele ukuba yenzekile kuye.
Paola Acuna sitsho
Enkosi ngolwazi, iluncedo kakhulu, ndingathanda nokwabelana ngamava am neekati kuba bendihlala ndifuna ukuthatha enye, bandinike encinci, kungapheli iiveki ezimbini kwaye yaphuma, eyesibini yayindlongondlongo kwaye undibilele, inqaku kukuba ndithathe isigqibo sokuthatha iikati ezimbini kunye nabantakwethu abakhulu nabasetyhini ababeshiyiwe endlwini, kwaye ndonwabile kakhulu kubo ukuba baziphathe kakuhle kakhulu kwaye ababaleki baziva bonwabile apha kwaye ingcebiso yam ayisiyokuba bafuna kuphela ukwamkela iikati ezincinci kodwa abantu abadala nabo banombulelo kakhulu kwaye bayaziqhelanisa ngokugqibeleleyo ukuba ubanika kakhulu uthando nothando, ukuba bamkela ezinkulu, abazukuzisola ngazo.
Phendula Paola Acuña
Enkosi ngokusixelela ibali lakho Paola.
Sithanda iziphelo ezimnandi 🙂
Molo, ndifike kweli nqaku kuba ndiziva ngathi ikatana yam ayikhuli ngokukhawuleza, ingaphezulu kweenyanga ezimbini ubudala kwaye andiboni kwangaphambili. Andazi nokuba ndiyoyisakala kukutya kwakhe.
Ingaba inobunzima obungakanani? Ngapha koko, ukuba omncinci utya kamnandi kwaye uphila ubomi obuqhelekileyo, ungakhathazeki. Kukho iikati ezihlala zincinci.
Molo, udadewethu unamantshontsho ekati amabini aneenyanga ezintlanu kwaye zincinci, ziya kuba nobunzima obungaphezulu kwama-500 eegram okanye i-600 gram kwaye andiboni ukuba zikhula kakhulu kwaye sikhathazekile
Ngaba ubasilele iintshulube? Ukuba akunjalo, ndicebisa ukuba ubathathe baye kugqirha wezilwanyana ukuze akunike iyeza eliphelisa iintshulube.
Ukuba basempilweni, akukho nto inokukhathaza. Kukho iikati ezihlala zincinci.
Molo, ulungile kwaye wamkele intshontsho elinenyanga enye ubudala kwinyanga ephelileyo kwaye iveki inobunzima obungama-337 gram andazi nokuba izobunzima okanye yinto yesiqhelo, iintsana zayo ezincinci zife ngesiquphe le kati itya pokito a pokito namhlanje x umzekelo x kusasa ukutyiwa Amashwamshwam aya kulala, ndinexhala, ukuba kwenzeka into efanayo kuye, ndandingoyena mntu ukhubazekileyo kwaba bathathu, kodwa ekugqibeleni, akadlali kakhulu.
Ikati eliphilileyo kufuneka libe luhlaza ngesisu esingqukuva; ngaphandle kokubaxa, kodwa xa uhleli ngasemva kufuneka ubone umva wakho emagxeni ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokuthe tye, kwaye emva koko amagophe akho.
Ukuba uthi uyambona elusizi, kwaye uthathela ingqalelo ukuba abantakwabo baswelekile, ndingacebisa ukuba ndimse kugqirha wezilwanyana ngokukhawuleza. Unokuba ne-parasites yamathumbu (iintshulube), kwaye ukuzikhupha kuya kufuneka uthathe isiraphu.
Nayeli glz sitsho
Molo, ingxelo yakho inomdla kakhulu, ndithathe nje ikatana, andizukuyikhupha kwaye ndiyoyika ukuba izakuhamba.
Ndimnqande njani angahambi?
Phendula uNayeli glz
Kufuneka uchithe ixesha elininzi kunye naye: udlala naye, ukuba naye. Ukongeza, kukwabalulekile ukumthena kwiinyanga ezi-6 zokumthintela ekubeni nomdla wokuphuma aye kufuna iqabane.
Molo, ikati yam eneenyanga ezintlanu ubudala yaphuma kwaye kubonakala ukuba ishiye ikati 🙁 Abagwetyiweyo babuya bazibhuqa. Umbuzo ngulo, ngaba angakhulelwa iinyanga ezintlanu kuphela? Kwaye ukuba kunjalo, ngaba isenokubulawa inzalo, okanye kuya kufuneka ndilinde?
Yhe Kulungile. Ungayithatha ukuze usebenze ngoku ngaphandle kweengxaki.
Ndithathe intshontsho lekati elidala lasemini ndaliphakamisa ngeebhotile kwaye ndiyinika ukufudumala, mhle kakhulu umhlophe ngamehlo aluhlaza kunye nomsila omdaka omnyama. Uyadlala kwaye uyakuthanda ukuphuma aye kwipatiyo, ndihlala kwindawo enezindlu, ndiyamsusa iintshulube kwaye ngoku kule veki bendizakumtofa ndibeke i-xip, kodwa ngale Lwesine uhambe nge-11 kwaye Khange ndimbone, ndikhangele macala onke ndabuza kubamelwane.
Umbuzo wam uthi ingaba ikati encinci inokuhamba okanye ishushu .. Andiqondi kunzima ukuba ibuye.
mhlawumbi umntu othile wayithatha, kodwa yayingazinzanga kwaphela
Indala kangakanani? Nge-5-6, bahlala befuna ukuphuma, ngamanye amaxesha nangaphambi koko (kunye neenyanga ezine ezinesiqingatha okanye njalo).
Ngokumalunga nombuzo wakho, kunokwenzeka ukuba ikufuphi, ifihliwe. Amakati aqhele ukuya kude, kuncinci ukuba asemancinci. Jonga phantsi kweemoto nakwiindawo anokufumana kuzo ukuze abone ukuba unethamsanqa na.
UAlex Devia sitsho
Molo, ndinekati enonyaka ubudala, kwaye emva kweenyanga ezintathu ukulahleka kweenwele kube yingxaki yethu enkulu kangangokuba ungenza amanani ngayo, uya kudokotela wezilwanyana kwaye kubonakala ngathi kuyinto eqhelekileyo, hayi eyethu sitshintshe ukutya kwakhe amaxesha ama-4 ngonyaka, akanamdla wokutya, ngoku utya iMirringo, asazi ukuba iyamlungela na, abanye bathi luxinzelelo, abanye abanazo iivithamini, kwaye ngaphambili besimthengela ukutya okuphambili , Ndaye ndafunda ukuba ngequbuliso waziva elilolo, sizise intshontsho lenzala nelinyanga elineenyanga ezimbini ubudala, khange akwazi ukwabelana nabo, uye wahlabeka kumlenze wakhe omncinci kwaye masithembe ukuba uza kuphila ngokukhawuleza, mna Ndifuna nje ukumbona onwabile, emhle, ezolile, simthanda kakhulu, ndiyathemba ukusombulula ingxaki yeenwele enkosi !!!
Phendula kuAlex Devia
Ndicebisa ukuba ndimnike ukutya okungenagwele. Jonga iilebhile zezithako, kwaye ukuba ufumanisa i-oatmeal, umbona, irhasi, okanye nayiphi na into efumanekayo, yilahle.
Andinakukuxelela ukuba kukutya okanye ayisiyiyo le nto yenza ukuba ikati yakho iphulukane neenwele, kuba zininzi izizathu ezinokuthi ziwele kuzo,apha unolwazi oluthe kratya malunga nayo), kwaye ngaphandle koko andinguye ugqirha wezilwanyana. Kodwa ngamava ndinokukuxelela ukuba isilwanyana esidla inyama njenge kati kuxa sitya ukutya okusemgangathweni, ngaphandle kweenkozo, sinengubo esempilweni nebengezelayo.
Molweni, ndithathe iikati ezi-2, abantakwethu abancinci malunga neenyanga ezi-4 ezidlulileyo, inkunzi nemazi, umahluko kubukhulu xa sibamkela babebancinci, babeneenyanga ezine ubudala, kodwa ngoku ininzi, inkwenkwe inkulu kakhulu kwaye intombazana incinci kakhulu., sixhalabile, asazi ukuba inkwenkwe ikhula kakhulu okanye ukuba ayikhuli
Iikati zamadoda zihlala zikhulu kunamabhinqa. Ngokomgaqo akukho nto inokukhathazeka ngayo xa besempilweni.